Super Skunk mbeu | MyWeedSeeds.com
Super Skunk yakafuridzirwa nevanoda mbanje veSkunk, muchinjikwa pakati peSkunk #One uye mhando yeAfghan. Iye zvino ndiye mumwe wemhando dzembanje dzakakurumbira uye haambokundikana kurarama zvinoenderana nemukurumbira wake semuti wakasimba unobereka goho rine simba. Super Skunk mbanje inogadzira yakatetepa, iri pakati-kureba chirimwa chinoda kukurudzirwa kushoma kuburitsa gohwo rakanaka. Iye ane yakanaka bud-to-mashizha chiyero uye isarudzo yakanakisa yevanoda kurima varidzi, kunyanya kana ivo vari kukura mumba kana mune greenhouse kwaanozokudziridza yakakura centre colas (epamusoro mabukira). Mafuta ake, akasimba mabukira akazadzwa neTC makristasi uye resin. Kana iwe ukashora uchipesana nezvinomera zvinokura, iwe unenge uine pakarepo gore rekunhuwa skunk. Kunhuwa kwake kwekusvuta uye hwema ichokwadi Skunk. Kunyange isiri munhu wese anozviona zvichinakidza, Skunk aficionados do! Iye anogadzira anonakidza epamusoro aine akati wandei muviri kupfuura iwe unowana kubva kuSkunk # One.